တတိယအင်အားစု “တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ…အဖွဲ့ချုပ်ကြီး” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကျင်းပတော့မယ့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မွတ်စလင်ညီလာခံအကြောင်း မေးမြန်းချက်
မောင်သိန်းစိန် .. လုံမငယ်တွေကတော့ တရုပ်ပြည်သွားကုန်ကြသတဲ့ ….. “လင်လဲရ ဝမ်းလည်းဝ ” ဆိုတဲ့စကားပုံတောင် ပေါ်လာလိုက်သေး…. »
ဟိုတနေ့က…ကနေဒါဦးအောင်တင်ရေးထားတာလေးကို…ကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီးက. share ပြီး
မှတ်ချက်ကလေး…ရေးထားတာတွေ့ကထဲက…ရေးမလို့ဟာ….ကြားဖောက် ရေးစရာတွေဝင်လာ တော့….မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး….
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ…အာဏာရ…ကြံ့ဖွံ့အင်အားစုရယ်….အတိုက်အခံလို့ပြောနေကြတဲ့…. မတိုက်အခံ NLD အင်အားစုရယ်…အင်အားစု ၂ခုရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်….
မဘသတွေ…စစ်ခွေးအုပ်စုတွေ…ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ အမွေစားအမွေခံများပါတီတွေကိုတော့…. ကြံ့ဖွံ့ အင်အားစုထဲမှာဘဲ…ထားလိုက်ပါတော့…
NLD ကတော့….NLD ဘဲရှိမှာပါ….စစ်အစိုးရကို မကြိုက်တဲ့သူများကတော့…NLD ကိုဘဲ…မဲပေးကြမယ်လို့…ယုံကြည်ရတာဘဲလေ…
NLD ကို မဲပေးဖို့ဆိုပြန်တော့လည်း…အားကိုးအားထားပြုယုံကြည်စရာဆိုလို့…ဒေါ်စု တယောက်သာရှိပြီး…အခြား..လောက်လောက်လားလားခေါင်းဆောင်…မတွေ့ရတဲ့အပြင်… ပြည်တွင်းက…ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိစ္စတွေမှာ…တာဝန်မဲ့စွာလက်ရှောင်နေခဲ့တာရယ်…တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ အစိုးရစစ်တပ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့
NLD ထောက်ခံသူ…ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဒီမိုဆိုသူတွေကြောင့်…NLD ရရှိနိုင်မဲ့…မဲစာရင်း
တိုင်းရင်းသားအားလုံးက…ဗမာလူမျိုးကို မုန်းကြတာမဟုတ်ပါဘူး…ဒါပေမဲ့ ဗမာစစ်အစိုးရလုပ်နေ တဲ့…မဟာဗမာ..လူမျိုးကြီးဝါဒကို…မကြိုက်ကြပါဘူး…
အဲ့ဒီ ဘုံရပ်တည်ချက်အပေါ်မှာရပ်တည်ပြီး…တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအားလုံးပေါင်းစည်းပြီး… အဖွဲ့ချုပ်ကြီးတခု ထူထောင်လိုက်ရင်….တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေအားလုံးမှာ…အနိုင်ရမှာသေချာ ပါတယ်…
NLD …ကို…စိတ်ပျက်နေတဲ့…မွတ်စလင်မဲတွေဟာလည်း…တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်အတွက်ဘဲ …ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်
ပြည်နယ်အသီးသီးမှာ…တိုင်းရင်းသားတွေဟာ…ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး အနိုင်ရဖို့…သေချာနေသလို… တိုင်းတွေထဲမှာလည်း…တိုင်းရင်းသားအများစုရှိနေတဲ့ဒေသတွေရှိနေသေးတာဘဲ…တိုင်းရင်းသား မဲတွေနဲ့…မွတ်စလင်မဲတွေပေါင်းစုလိုက်ရင်…တိုင်းရင်းသားအဖွဲချုပ်ကြီးဟာ…အရှိန်အဟုန်…ကောင်းကောင်းနဲ့…အောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်ပါတယ်….တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အထဲမှာ…ခရစ်စယန်.. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့…နတ်ကိုးကွယ်သူတွေဘဲရှိလို့…အရိုးနဲ့ ကြုံရာနေရာ စည်းရိုးထိုးချင်တဲ့အုပ်စု
အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုသာ…အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့…တိုင်းပြည် အတွက်…အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ.. .ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမှာလည်း…ပူစရာမလိုတော့သလို…ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲလိမ့်မယ်လို့…အကြောင်းပြပြီး…စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးလည်း…လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့…
အရေးကြီးတာ…တခုတော့ရှိတယ်….အမည်ပေါက်…ပြည်နယ်တွေထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်ထောင်စုသားတွေအားလုံး…တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးရဲ့…အခွင့်အရေးတွေကိုတော့…လေးစား စောင့် ရှောက်ကြရလိမ့်မယ်….
ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာလည်း…ထိုနည်းတူစွာပါဘဲ…ရှိရှိသမျှ…တိုင်ရင်းသားလူမျိုးစု…လူမျိုးငယ်တွေ… အားလုံးကို…တန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိပါစေမယ်ဆိုတဲ့…အာမခံချက်တော့…လိုအပ်ပါ လိမ့်မယ်….
This entry was posted on May 10, 2015 at 1:38 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.